Ny vondrona eropeana dia hanafoana ny hetra amin'ny fanjifana tena | Green Renewable
Tomàs Bigordà | | Herin'ny rivotra, Angovo Solar Photovoltaic, Angovo azo avy amin'ny masoandro, Angovo azo havaozina
Ny Parlemanta eropeana dia manolo-tena hampiroborobo ny fandaniana tena amin'ny angovo azo havaozina any amin'ny firenena rehetra ao amin'ny Vondrona eropeana, ankoatry ny fanentanana ny fanjakana mba "hiantoka ny mpanjifa manan-jo hanana lasa mpanjifa tena amin'ny angovo azo havaozina ”.
Ho an'izany, ny mpanjifa rehetra dia tokony hanana alalana "handany sy hivarotra ny ambim-bavany amin'ny herinaratra azo havaozina, nefa tsy iharan'ny fomba fanavakavahana sy fiampangana na tsy mifandanja izay tsy hita taratra amin'ny fandaniana.
Nanaiky fanitsiana ny Kongresy izay mangataka ny famelana ny fampiasana herinaratra avy amin'ireo loharano azo havaozina ho an'ny famokarana manokana ary mijanona ao anatin'ny tranony "tsy iharan'ny haba, na sarany na haba isan-karazany". Ity fanitsiana ity dia nahazo vato 594 manohana, 69 manohitra ary 20 tsy nifidy.
MEP sosialista marobe no nanamafy: “Niaro zavatra nisy tolona izahay, raha ny fahitako azy, izay miantoka ny fandehanan-tena ho zon'olombelona. Ny fanjifana tena angovo azo havaozina ho toy ny zony ary manafoana ireo sakana amin'ny fitantanana sy mandrara ny fepetra toy ny hetra fantatry ny fireneko, ny hetra amin'ny masoandro.
1 Inona ny hetra amin'ny Masoandro?
2 Fanitsiana amin'ny ho avy
Inona ny hetra amin'ny Masoandro?
Ny filankevitry ny minisitra dia nankatoavina tamin'ny faran'ny 2015, ny didim-panjakana izay mametraka izay antsoiny «tolotra backup»Ho an'ny fanjifana tena, fantatra amin'ny anarana hoe hetra amin'ny masoandro
Mampalahelo fa tanteraka ny ahiahy ratsy indrindra momba ny fikambanan'ny mpanjifa, ny vondron'olona miaro ny tontolo iainana, ny fikambanam-barotra ary ny mpanohitra. Efa ela izy ireo no nampitandrina an'ity tranga ity, nanomboka 2 taona talohan'izay ny minisiteran'ny Indostria dia nanambara ny tanjony
Miorina amin'ny tatitra izay nanolotra fanovana vitsivitsy ny National Markets and Competition Commission (CNMC), ary ny fankatoavana ny filankevi-panjakana taorian'izay; nankatoavin'ny Governemanta io didim-panjakana vaovao io nefa tsy nisy olana.
Ny hetra masoandro nankatoavin'i José Manuel Soria tao amin'ny Minisiteran'ny Indostria dia iray amin'ireo lalàna tsy azon'ny olom-pirenena. Maninona i Alemana, firenena izay tsy dia manana masoandro loatra noho isika, nametraka takelaka bebe kokoa tao anatin'ny herintaona noho i Espana tamin'ny tantarany rehetra?.
Ny marina dia Espaniola dia mpanentana lehibe ny angovo azo havaozina tamin'ny fiandohan'ny taonjato, ary manolotra bonus ho an'ireo nametraka panneaux solaires. Na izany aza, tombantombana eo amin'ny tsena sy ny refin'ny governemanta PP nanomboka ny taona 2011 dia nanomboka nanasarotra an'io toe-javatra io izy ireo.
Ho an'ireo fikambanana iraisam-pirenena toa an'i Greenpeace, dia maneho ny "politika mazava hanasaziana ny angovo azo havaozina, ny fitsitsiana ary ny fahombiazan'ny angovo."
Raha ny marina dia mangataka amin'ny Governemanta i Greenpeace fa i Espana lasa mpitondra havaozina indray: Takian'izy ireo ny lalàna momba ny fiovan'ny toetrandro amin'ny ho avy mba hampidirana angovo madio 100%. Tsaroan'izy ireo fa naneho ny fahaizan'izy ireo ara-teknika sy ara-toekarena folo taona lasa izay.
Fanitsiana amin'ny ho avy
Raha nanontaniana ny amin'ny hoavin'ity fanitsiana amin'ny fifampiraharahana amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fiaraha-monina ity dia nanantena ny hahazo ny fanohanan'ny Vaomiera eropeana ny Sosialista ary nampitandrina fa tsy hiala ny Parlemanta eropeana, noho ny fanampiana voarain'ity ampahan-dahatsoratra ity.
Raha tsy ampy izany dia nangataka ny hampiakatra ny lasibatry ny angovo azo havaozina ho an'ny Vondrona eropeana ny fivorian'ny parlemanta eropeana hatramin'ny 35% tamin'ny 2030, raha ampitahaina amin'ny kendrena 27% napetraka amin'izao fotoana izao.
Ny MEP dia nanaiky tamin'ny vato 492 manohana, 88 manohitra ary 107 tsy nifidy ny tatitra nataon'ny PSOE MEP José Blanco, izay mamaritra ny toeran'ny Parlemanta eropeana momba ny fifampiraharahana izay tokony hatomboka amin'ny filankevitry ny EU, ny andrimpanjakana misolo tena ny Firenena mpikambana, izay miaro ny hitazona ny tanjona amin'ny 27%.
Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, nanampy ny MEP fotsy hoditra: «Androany afaka milaza isika fa nanome ny Vondrona eropeana hafatra mazava sy tsy mazava momba ny fanatratrarana ny tanjon'i Paris ary hampiroborobo ny tetezamita angovo miorina amin'ny angovo madio sy ny angovo azo havaozina ”.
Mba hahatratrarana ireo tanjona vaovao azo havaozina, ny firenena dia tokony hametraka ny tanjon'ny firenena, izay hifandrindra sy hotandreman'ny sendika.
Ho fanampin'izany, ny MEPs an'ny Vondrona Eropeana dia nanaiky ny hametraka lasibatra mahomby amin'ny angovo ho an'ny 2030 ary 35%, izay hikajiana amin'ny vinavina ny fanjifana angovo amin'ity taona ity ihany araka ny maodelin'ny PRIMES, izay manahafana ny fanjifana angovo sy ny famatsiana ao EU.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny vondrona eropeana dia hanafoana ny hetra amin'ny fanjifana tena